Ihe Odide Rockin Ga - eduga na Ngbanwe Ọzọ | Blog Ahịa Blog
Tuzdee, Machị 8, 2011 Tuesday, October 4, 2011 Chris Bross
Kedu ihe Onye Rock Rock Opera Tommy nwere metụtara Ntugharị Weebụ? Naanị ihe niile!
Nkume ndi di egwu bu ndi gbanwere Rock & Roll na Landmark Rock Opera Tommy ha (1969). Chọrọ ịgbanwe ọnụego mgbanwe weebụsaịtị gị (2011)?
“Olee otú i chere ọ na-eme ya?
“Gịnị mere o ji dị mma nke ukwuu?”
Gịnị mere o ji dị mma otú ahụ? Ọdịnaya.
Chọpụta ihe m chọrọ. Enweghị m ike ịhụ ma ọ bụ metụ ngwaahịa gị aka ebe ọ bụ naanị m nwere ihe ị tinyere m n’ihu mgbe m ruru websaịtị gị.
Mara ihe kpatara m ji azụrụ.
Kedu ihe m chọrọ ma ọ bụ isi ihe mgbu? Kedu ihe na - eme gị iche iche iji dozie nsogbu m?
N’agbanyeghi na onwere mmasi ime ot so u ah u, echela na ihe m ch or o bu ego. Ileba (Ọmụmụ) na isi:
Otu ụlọ ọrụ na-agbazinye ụlọ ọrụ na-agba mbọ ịsọ mpi na ọnụahịa; ha so na ndị kachasị ọnụ n'ụdị ha. Kedu ihe kachasị mkpa nye ndị na-azụta ha? Mma na nnweta!
Companylọ ọrụ a nwere ọnọdụ iri na abụọ + gafere North America na ngwa ọrụ ha dị oke ọnụ "na ngwaahịa". Maa amụma? Ha anaghị agwa m nke a.
N'ihi oke ọnụ ahịa, achọrọ m obere ịhụnanya ọzọ. Ọ na-amasị m iso mmadụ kwurịta tupu mụ emee nkwa ịzụrụ. Nọmba ekwentị? Egosiputaghi ya na saịtị ma obu na mgbasa ozi PPC. Oops!
Adaberela n’ihe onyonyo naanị iji resị m ngwa ahịa ma ọ bụ aka ọrụ gị. Mepụta ọdịnaya dị mma maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla. Kụzie, Bịa, ma gwa m.
nwere ọdịnaya stellar maka ihe niile! Kedu peeji peeji ngwaahịa ị lere anya nwere ọdịnaya efu? Enweghị ọdịnaya, enweghị gburugburu, ọ nweghịkwa ahịa.
Ejila ụlọ ọrụ eme ihe mgbe ọ bụla jargon ma ọ bụ clichés.
Nsusu (mee ka ọ dị mfe, nzuzu) m.
Be agbanwe agbanwe. Jiri otu olu kwuo okwu. Ejila ozi di iche iche sitere na otutu ndi ozo.
Were otu ihe dọpụta m nọ n'ọrụ olu. Duru na uru ya n'ụzọ na-akpali akpali, dịka, "Na-abawanye ROI 50% na ụbọchị 50…
Ọ dịghị mama, Biko. Ewela iwe n’azụ, gwa m na mmiri na-ezo. Esemokwu maka, kọwaa uru nke, ngwaahịa / ọrụ gị, mana ajụla m ịrị ugwu mgbe ihe niile ị ga-ere m bụ ugwu ahumachi. Nghahie = azaghị ahịa!
Nabata mgbakọ. Mkparịta ụka dabere na "mkpokọta zuru ụwa ọnụ," nke dabere na nleta ọ bụla nke 100 ma ọ bụ 1000s gafee web. Iso m iche abụghị naanị imetụ m aka.
Spell… ya…: kedu ka ị si egbo nsogbu m ma ọ bụ gbooro m mkpa m?
Nke a kwesịrị ịdị mfe, nri? Ọ bụghị. Ọzọkwa, ole saịtị ị gara nke na-adịghị egbo mkpa gị? Mmadu ole na-eme ka o sie ike inweta ihe m choro?
Ka m kọwaa - ọ dịghị oge - ka m chịkọta:
Mee ka ọ dịrị m mfe ịchọta ihe m chọrọ
Gwa ma tinye aka na ọdịnaya doro anya, dị nkenke, na-agbanwe agbanwe
Gosiputa ngwa ahia / oru gi
Bụrụ azịza maka agụụ m / mkpa m
Mepụta ọdịnaya dị mma ma ị ga - enwe ndị ọbịa “na - achọ obi ụtọ n'ụkwụ gị.”
edemede dị egwu, daalụ